कस्तो अचम्म ! अस्पतालमा छोरी घर पुग्दा छोरा - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो अचम्म ! अस्पतालमा छोरी घर पुग्दा छोरा
धनगढी, भदौ २२ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ८ जमुनाभाडीकी २३ बर्षीया काली खातीले भदौ १७ गते बिहान सेती अञ्चल अस्पतालमा छोरी जन्माईन ।
छोरीको स्वास्थ्यमा केही समस्या भएको भन्दै चिकित्सकले तुरुन्तै एसएनसियुमा भर्ना गरे । आमा प्रसुतिगृहमै भर्ना भइन् । भने छोरीलाई अलग्गै भवनमा राखियो ।
बेलुकी एसएनसियुबाट छोरीलाई दुध खुवाउन भन्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सकले कालीकी आमा दिलु बोहरालाई बच्चा दिए । कालीले दुध खुवाईन् । डिस्चार्ज भएपछि घर गईन् । घर पुगेपछि बच्चाले दिसा गरेको भन्दै डाईपर निकाल्दा खाती दम्पती छक्क परे ।
अस्पतालमा छोरी जन्मेको भनेका थिए, घर पुग्दा त छोरा पो देखियो, कालकी पति मेघराज खातीले भने, ‘घर पुगिसकेका खाती दम्पतीलाइ एक चिकित्सकले फोन गरेर तुरुन्तै अस्पताल आउन भने । अस्प्ताल पुगेका उनीहरुको हातबाट शिशु छोरा थुतेर अर्को शिशु छोरी थमाईयो ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
ट्याग्स: godawari, kailali, Seti zone hospitel